Xiaomi dia nanambara ny famantaranandro Watch Color ho an'ny 3 Janoary | Androidsis
Taorian'ny fampidirana ny smartwatch marika Mi-marika voalohany tamin'ny Novambra, Xiaomi dia nanolotra ny vaovao Watch Color ora vitsy lasa izay. Tamin'ny tabataba kely fotsiny no nanaovany azy, tao anaty fahanginana ary tsy nilazalaza antsipirihany momba ity maodely ity izay mikendry ny ho safidy fanomezana mety indrindra ho an'ireo tia ny Smartwatch amin'ny taranaka faramparany.
Ny Color Watch Xiaomi dia ho tonga amin'ny 3 Janoary any Shina, avy eo miandalana dia hanao izany amin'ny faritany hafa araky ny voalaza amin'ny kinova Mi Watch. Ho fanampin'izay, hanomboka ny Aziatika kinova Premium Miaraka amina endrika mahasahy sy tena mety raha tianao hifehezana ny masontsivana fanazaran-tena isan'andro.
Ny anarany manokana dia manondro ny fahafahany mampiasa fehikibo misy loko isan-karazany, miresaka fehikibo maherin'ny 1.000 miaraka amin'ny alokaloka izy ireo toy ny manga, mainty, maitso, lilac, mavo, mena, hoditra, metaly, ankoatry ny hafa. Mampatsiahy tokoa ity maodely ity mankany amin'ny Amazfit GTS, iray amin'ireo famantaranandro natombok'ilay mpanamboatra azy vao tsy ela akory izay.
Ny efijery dia mikendry ny ho boribory 1,39 santimetatra ary ny vahaolana 454 x 454 teboka, io no hany angon-drakitra nambara hatreto miaraka amin'ny feo maro samihafa. Ny fiasa dia: fanaraha-maso ara-batana mahazatra, sensor amin'ny tahan'ny fo, accelerometer ary misy barometatra ihany koa.
Ny teboka tsara dia ny mahazaka rano 5 atm be indrindra, na inona no mitovy 50 metatra ary ampy raha te hiditra amin'ny pisinina na morontsiraka miaraka aminy ianao. Xiaomi dia niasa tamim-pahombiazana tamin'ny famoronana talohan'ny nahatazavany tamin'ny fiandohan'ny taona 2020.
Ilay any Beijing dia nanambara fa ho hita amin'ny 3 janoary ity famataran-raharaha ity amin'ny raharaha volafotsy, mainty sy volamena. Ny vidin'ny Watch Color dia tsy fantatra ary amin'ny 3 Janoary dia ho fantatsika ny hery, fitehirizana ary ny vidiny farany amin'ny famantaranandro smartwatch izay kely na tsy nisy fantatra talohan'ny nanombohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Xiaomi dia nanambara ny famantaranandro Watch Color ho an'ny 3 Janoary